ပျဉ်းမနားမြို့မှ နှစ်ပေါင်း ၉ဝ ခန့် သက်တမ်းရှိ တိုဟူးလုပ်ငန်းမှ နေ့စဉ် ပိဿာချိန် ၁ဝဝဝ ခန့် ?? - Yangon Media Group
ပျဉ်းမနားမြို့မှ နှစ်ပေါင်း ၉ဝ ခန့် သက်တမ်းရှိ တိုဟူးလုပ်ငန်းမှ နေ့စဉ် ပိဿာချိန် ၁ဝဝဝ ခန့် ??
နေ ပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ တိုဟူး ကျောက်တောင်ရပ်ကွက်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၉ဝ ခန့်ကစတင်၍ မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြသည့် ဒေသထွက်အစားအစာလုပ်ငန်းဖြစ်သော တိုဟူးလုပ်ငန်းမှ နေ့စဉ်တို့ဟူးပိဿာချိန် ၁ဝဝဝ ခန့် ဈေးကွက်သို့ဖြန့်ချိရောင်းချနေ ကြောင်း ယင်းရပ်ကွက်ရှိ တိုဟူးလုပ် ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ဦးရဲညွန့်သန်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်မိသားစု တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြလို့ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြတာကို အစွဲပြုပြီး အခုထိ တိုဟူး ကျောက်တောင်ရပ်လို့ အမည်တွင် နေတာ တိုဟူးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူက စက်ကြိတ်ခုံနဲ့ တိုဟူးကျို ခုံ ထောင်ထားတယ်။ သူတို့ဈေးကွက် ပေါ် မူတည်ပြီး တစ်နေ့ငါးပိဿာ တစ်ခုံကုန်တဲ့ဒယ်ကျိုတဲ့သူကလည်း သူနိုင်သလောက်၊ အချိန် ၁ဝ ပိ ဿာနိုင်တဲ့သူကလည်း အချိန် ၁ဝ ပိဿာခုံလောက်လုပ်ကြတာ ပေါ့။ တိုဟူးကျောက်တောင်ရပ်ဆိုပြီး ရှိနေသရွေ့ လုပ်ငန်းမပျောက်လောက် ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒေသထွက်အစား အစာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့် တို့ဟူးလုပ်ငန်းက ပျောက် ကွယ်သွားဖို့က လမ်းစမရှိသေးပါဘူး”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
တိုဟူးကျောက်တောင်ရပ်ကွက်ရှိ တိုဟူးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအားလုံးမှ နေ့စဉ်တိုဟူးပိဿာချိန် ၁ဝဝဝ ခန့်ထုတ်လုပ်ပြီး နေ ပြည်တော်မြို့မဈေး၊ သပြေကုန်း ဈေး၊ ပျဉ်းမနားမြို့မဈေး၊ အဟာရ သုခဈေး၊ လယ်ဝေး၊ အေလာ၊ သာဝတ္ထိမြို့များသို့ ဈေးကွက်ဖြန့် ရောင်းအားရှိသည့်အပြင် စက်ဘီးနှင့် မြို့တွင်းလှည့်ပတ်ကာ တိုဟူး ရောင်းစားသူများလည်းရှိကြောင်း၊ တိုဟူးတစ်ပိဿာ ကျပ် ၂ဝဝဝ ဈေးဖြင့် လက်လီ၊ လက်ကားဈေး နှုန်းတစ်ပြေးညီရောင်းချကြောင်း၊ တိုဟူးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် တိုဟူးခြောက်ကြော်၊ တိုဟူးချိုးကြော်လုပ်ငန်းက ယခုမိသားစုစီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက် လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ခေတ်စားလာကြောင်း သိရသည်။
”တိုဟူးကြော်ဈေးကွက်အပြင် တိုဟူးကြိုတဲ့အခါ ဒယ်မှာကပ်နေတဲ့ ချိုးတွေကို ခွာပြီးတော့ အခြောက်လှန်းပြီးရင် အဲဒီတိုဟူးချိုးတွေကို ကြော်ပြီးရောင်းချကြတဲ့ တိုဟူးချိုး ကြော်အဖြစ် ပလတ်စတစ်အထုတ် လေးတွေနဲ့ ရောင်းတဲ့ဈေးကွက် တွေရှိနေတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယခုပျဉ်းမနားမြို့၏ အထင်ကရလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် မိရိုးဖလာဒေသထွက် တိုဟူးလုပ်ငန်းက မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ငန်းလည် ပတ်နိုင်ရန် ချေးငွေလုပ်ငန်းများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။
'သရဲသင်္ဘော' ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မကြာမီရုံတင်မည်
လစာလျှော့ချရန် စီစဉ်နေသည့် အာဆင်နယ်အသင်းကို အသင်းခေါင်းဆောင်ကိုစီရယ်နီ ဥပဒေအရ ပြန်ရင်ဆိုင်မည်